Mbipu osisi bụ ihe siri ike ma ọ bụghị usoro nchebe ọ bụla. A na-emekarị ya site n'enyemaka ma na-efopụ. Otú ọ dị, n'oge na-adịbeghị anya, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi kpochapụ ochie, osisi mberede. Isiokwu ahụ na-atụle ụzọ ndị dị ugbu a si emebie osisi na-enweghị egbutu ya.
Dị ka uyi, ịkụ ihe ma na-elekọta ash na mba ahụ
A na-eji osisi ndị e ji osisi rụọ ọbụna site n'aka ndị nna nna anyị iji mepụta ngwá agha na ihe ndị na-agbanwe agbanwe maka ngwá agha oyi. Ugbu a, a na-akụ osisi ahụ dị ka ihe eji achọ mma nke ubi ahụ, mkpụrụ nke ash na-eji nri, na akwụkwọ na ogbugbo na-eji maka ọgwụ. Ash: Nkowasi Ash bu onye nke Olive.
Ọka mma iji mee ka osisi si rotting
Osisi bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị ejikarị rụọ ọrụ na ịmepụta ngwá ụlọ. Na iji rụọ ọrụ ruo ogologo oge o kwere omume, ọ chọrọ nlekọta kwesịrị ekwesị. Enwere ọtụtụ ihe nwere mmetụta dị njọ n'osisi ma mee ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere, na-emebi àgwà ndị dịpụrụ adịpụ nke ihe onwunwe ahụ ma ọ bụ na-ebibi ya.
Kedu nkụ nkụ ka mma
Tupu mmalite nke oge okpomọkụ, ndị ahịa na-azụ ahịa na-azụta osisi, na-aṅa ntị naanị maka ọnụahịa na ọdịdị nke ihe onwunwe combustible. A na-eji ihe ọkụkụ na-eme ihe na-esi ísì ụtọ na anụ ahụ, nke anụ ahụ na-enwetakarị uto na-adighi mma. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa ihe kpatara ị ga - eji leba anya n'ihe ndị nwere otu osisi, olee ọdịiche dị n'etiti nkume siri ike ma dị nro.